Zimbabwean President Robert Mugabe casts his vote for a referendum on a new constitution that all main political parties have backed in Harare, Saturday, March 16, 2013. Officials said polling was busy in populous districts after voting stations opened at 7.00 a.m. (0500 GMT) across the country. The proposed constitution reduces the entrenched powers of Zimbabwe's president and includes a range of democratic reforms demanded by regional mediators in Zimbabwe's decade-long political and economic crisis. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi) | View photo - Yahoo News
Yezidis in Iraq Zimbabwean President Robert Mugabe casts his vote for a referendum on a new constitution that all main political parties have backed in Harare, Saturday, March 16, 2013. Officials said polling was busy in populous districts after voting stations opened at 7.00 a.m. (0500 GMT) across the country. The proposed constitution reduces the entrenched powers of Zimbabwe's president and includes a range of democratic reforms demanded by regional mediators in Zimbabwe's decade-long political and economic crisis. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Zimbabwean President Robert Mugabe casts his vote for a referendum on a new constitution that all main political parties have backed in Harare, Saturday, March 16, 2013. Officials said polling was busy in populous districts after voting stations opened at 7.00 a.m. (0500 GMT) across the country. The proposed constitution reduces the entrenched powers of Zimbabwe's president and includes a range of democratic reforms demanded by regional mediators in Zimbabwe's decade-long political and economic crisis. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)